«EthicalGEO» - kudiwa kwekudzokorora njodzi dze geospatial maitiro
Gumiguru, 2019 Geospatial - GIS
IAmerican Geographical Society (AGS) yakagamuchira rubatsiro kubva kuOmidyar Network kuti itange hurukuro yepasi rese nezve ethos of geospatial tekinoroji. Yakagadzirirwa «EthicalGEO», danho iri rinodaidzira vanofunga kubva kumafambiro ese epasi rese kuzotungamira mazano avo epamoyo pazviratidziro zvitsva zveegeneticati izvo zviri kuumbazve nyika yedu. Tichifunga nezve hukuru hunowanda hwezvinhu zvitsva zvinoshandisa geographic data / tekinoroji nenyaya dzemaitiro akajeka egwara, EthicalGEO inotsvaga kugadzira chikuva chepasi rose kufambisazve hurukuro yakakodzera.
“KuAmerican Geographical Society tinofara kubatana naOmidyar Network muchirongwa chakakosha ichi. Tinotarisira kuzarura hunyanzvi hwehunyanzvi hwezvematunhu akawedzerwa uye nekugovana mazano avo nepasi pano papuratifomu yepasi rose, "akadaro Dr. Christopher Tucker, purezidhendi weAGS.
"Tekinoroji yeGeospatial inoramba iri simba risingaite kune zvakanaka, zvisinei, pane kudikanwa kwekugadzirisa mhinduro dzisingadiwe dzinogona kubuda nehunyanzvi hwekuita hunyanzvi," akadaro Peter Rabley, anoshanda naye panjodzi kuOmidyar Network. "Tinofara kutsigira kumisikidzwa kweE EthicalGEO, iyo inotibatsira kunzwisisa zviri nani nzira yekuzvidzivirira kubva pane zvinokanganisika isu tichienzanisa nemhedzisiro inogoneka matekinoroji egenogatial pakufambisa mhinduro kumamwe matambudziko akanyanya evanhu. kushayikwa kwekodzero yezvivakwa, kushanduka kwemamiriro ekunze uye kusimudzira kwepasi rose «.
Iyo EthicalGEO Initiative ichakoka vanofunga kuti vatumire mavhidhiyo mapfupi ayo anoratidza yavo pfungwa yakanakisa yekugadzirisa zvine musoro "GEO" nyaya. Kubva pane yekuunganidzwa kwevhidhiyo, vashoma vachasarudzwa vanozogamuchira mari yekuwedzera mazano avo, uye nekupa hwaro hwekuwedzera hurukuro, vachigadzira kirasi yekutanga yeve AGS EthicalGEO Fellows nhengo.
Kuti uwane mamwe mashoko, shanya www.muzageo.org.
Previous Post«Previous Dhizaini yekubatanidza - kuzvipira kune yepamusoro BIM kuburikidza neDhijitari Mapatya
Next Post Nyowani iTwin gore remasevhisi eDhijitari Mapatya Ekuvaka InjiniyaNext »